थाइराइड जटिल रोग होइन, भ्रम मात्र हो, सजिलै हुन्छ उपचार : डा.प्रियादर्शनी योञ्जन (भिडियो) - Nepal Insider
Home/स्वास्थ्य/थाइराइड जटिल रोग होइन, भ्रम मात्र हो, सजिलै हुन्छ उपचार : डा.प्रियादर्शनी योञ्जन (भिडियो)
ज्ञानु दुलाल, काठमाडाै‌ । पछिल्लो समय थाइराइड रोगका बिरामी संसारभरि नै बढिरहेका छन् । यो रोग बढ्नुको प्रमुख कारण स्क्रिनिङ हो । हार्मोनको कमी अर्थात् हाइपोथाइराडिज्मको समस्या विगतमा आयोडिनको कमीले हुन्थ्यो । अहिले अटो इम्युनको कारणले हुने गर्छ । यो भनेको भित्रबाटै ग्रन्थी भत्केर जाने अवस्था हो । अर्थात् ग्रन्थीले हार्मोन उत्पादन गर्ने काम गर्न छाड्ने अवस्था हो ।
दुई किसिमको हुन्छ थाइराइड
थाइराइड ग्रन्थीमा मुख्यतः दुई समस्या देखिन सक्छ । एउटा हार्मोन कमीको समस्या जसलाई हामी ‘हाइपोथाइराइडिज्म’ भन्छौँ । अर्को हर्मोन बढीको समस्या जसलाई ‘हाइपरथाइराइडिजम’ भन्छौँ ।हार्मोन बढी हुने समस्या अटो इम्युनको कारणले पनि हुन्छ । कहिलेकाहीँ भाइरल संक्रमणहरुका कारण पनि हुन्छ, जसलाई थाइराटाइटिस भन्छौँ । कुनै कुनै औषधिले थाइराइड हार्मोनमा गडबडी गराउन सक्छ । अप्रेसनपछि पनि थाइराइड हार्मोनमा गडबडी हुनसक्छ ।
गर्भवती महिलालाई थाइराइड कति जोखिम छ ?
गर्भवती महिलाले अनिवार्य थाइराइड जँचाउनुपर्छ भन्ने छैन । तर जँचाउदा पनि फरक पर्दैन । तर, लामो समयसम्म थाइराइडको औषधि सेवन गरेको छ भने नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । यदि यस्तो भएन भने पहिलो तीन महिना बच्चा खेर जाने हुन सक्छ । यो समयमा बच्चाको थाइराइड ग्रन्थ्री बनेको हुँदैन, उसले आफ्नो हार्मोन बनाउँदैन, आमाकोबाट थाइराइड हार्मोन लिन्छ, जुन आमालाई नै कम भएमा बच्चालाई पुग्दैन । अर्को कारण समयभन्दा अगाडि बच्चा जन्माउने आमाको ब्लड प्रेसर बढ्ने, सुगर हुने जोखिम हुन्छ ।
थाइराइडले कस्तो कस्तो समस्या निम्त्याउँछ ?
थाइराइड शरीरलाई तागत दिने हार्मोन हो । शरीरमा हार्मोन कमी भयो भने हाइपोथाइराइडिज्म भएमा खासै त्यस्तो जटिल समस्या त आउँदैन, तर असर गरिराख्छ । जस्तै, काम गर्न अल्छी लाग्ने, निद्रा बढी लाग्ने, थकाई लाग्ने, हातखुट्टा गल्ने, कपाल झर्ने हुन्छ ।यस्तै, हार्मोन बढी हुँदा गर्मी लाग्ने, तौल घट्दै जाने, मुटुको धड्कन बढ्ने, हातखुट्टा काप्ने, पसिना आउने जस्ता लक्षण हुन्छ । यो आफैं रोग नभए पनि यसका कारणले अरु रोगलाई बढावा दिन सक्रिय भूमिका खेल्छ । हार्मोन कम भयो भने मेटावोलिजम नै ढिला भइदिन्छ । यसले मुटुको धड्कन कम हुने, छाला फुस्रो हुने, शक्तिहीन महसुस हुने जस्ता समस्या हुन्छ । हार्मोन बढी भयो भने मेटाबोलिज्म नै बढी गराइदिन्छ, त्यसले शरीरका अंगले पनि छिटो काम गर्छ । यसले शरीरमा थकान देखा पर्छ । चिटचिट पसिना आउने हुन्छ ।
थाइराइड नियन्त्रणमा आयो भने त्यो समस्या आफसेआफ हराएर जान्छ
गर्भवती हुनुहुन्छ वा हुन लाग्नुभएको छ भने थाइराइडको परीक्षण गरेको राम्रो । मधुमेह तथा बाथको समस्या छ भने पनि एकपटक थाइराइड जँचाउनुहोस् । हाम्रो समाजका मनिसमा विभिन्न भ्रम पनि छन् । जस्तै, थाइराइडलाई एकदमै डरलाग्दो रोग हो, थाइराइड भएमा निःसन्तान हुन्छ आदि । तर वास्तविकता के हो भने यो दुईवटै कुरा सत्य होइन । अर्थात् थाइराइड नियन्त्रणमा आयो भने त्यो समस्या आफसेआफ हराएर जान्छ ।
हार्मोन बढाउने औषधि पनि पाइन्छ । हार्मोन बढी भएर घटाउन परेमा पनि औषधि पाइन्छ । चिकित्सकको सल्लाहमा खाँदा वेश हुन्छ । पहिले पहिले यसको पनि अप्रेसन नै हुन्थ्यो, तर अहिले औषधिले नै यसलाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ । थाइराइड भएकाले खाना बानुपर्ने जुन भ्रम छ, त्यो होइन । खाना बार्नु आवश्यक छैन । थाइराइडको उपचार नेपालमा सम्भव छ ।